हामी आदिवासी । जङ्गल फाँड्ने, खेती योग्य जमिन बनाउने, दुख गरेर खाने । बुडढापाकाहरू भन्छन् यो सबै हाम्रा पुर्खाले गरेको भनेर, अट्टेर जङ्गल थियो रे यो । मैले थाहा पाउँदा दुईचार घर भिन्नै थिए, अरू सबै झुप्राझुप्री, अहिलेका जस्ता घर कहाँ थिए र । सबै अरूका घरमा बँधुवा मजदुर । सबै खेतीहर मजदुर । संथाल, उराव, राजवंशी, मुन्डा अधिकांश भूमिहीन किसानको बसोबास भएको ठाउँ हो यो । दुईचार जोतेदारहरू (जमिनदारहरू) को कब्जामा थियो यहाँको जमिन । भन्छन् भारतमा सबैभन्दा बढी जमिनदार बङ्गालमा छन् । वर्षभरि काम गर्दा खान पुग्दैनथ्यो । औषधी.उपचारको त कुरै थिएन । जिन्दगीभरि जोतेदारको गुलाम । बङ्गालको अनिकाल सबैभन्दा डरलाग्दो अनिकाल । अनिकाल, भोकमरी, बेरोजगारी, शोषणको अर्को नाम थियो/हो बङ्गाल । थियो होइन, अहिले पनि छ । आदिवासीहरू भारतमा सबैभन्दा बढी उपेक्षित र उत्पीडित थिए र अहिले पनि छन् । हामी त्यही इतिहास बोकेर लडिरहेका छौँ अहिले पनि ।
जमिनदारको शोषणबाट वाक्क भएकाहरू उपाय खोजिरहेका थियौँ । एक दिन कामरेडहरूले हामी सबैलाई जम्मा पार्नुभयो । सबै कुरा सुनाउनुभयो, कति बुझ्यौँ, कति बुझेनौँ । चीनमा माओको नेतृत्वमा मजदुर-किसानको अगुवाइमा जनसेनाको निर्माण गरेर क्रान्ति भयो भनेर सुनाउनुभयो कमरेडहरूले । सांस्कृतिक क्रान्तिको झण्डा लिएर लाखौँ किसान उठेको कुरा सुनाउनुभयो कमरेडहरूले । निम्नमध्यम वर्गीय परिवारको छोरा हुनुहुन्थ्यो चारु बाबु । उहाँ गरिबको पक्षमा उभिनुभयो । चारु बाबु र कानु दाहरूले चीनको मात्र कुरा सुनाउनु भएन, भियतनामको कुरा सुनाउनुभयो, तेभागा आन्दोलनको कुरा सुनाउनुभयो, तेलङ्गाना किसान आन्दोलनको कथा सुनाउनुभयो र अन्त्यमा भन्नुभयो : “अब हामीहरू पनि उठ्नुपर्छ, उत्पीडितहरू जमिनदारविरुद्ध लड्नुपर्छ, जनविरोधी सत्ताका विरुद्ध लड्नुपर्छ । जनताको आफ्नै सत्ता ल्याउन लड्नुपर्छ । अब नक्सलबाडीबाट क्रान्तिको मशाल बाल्नुपर्छ ।” हाटबजार नै हाम्रो राजनीतिक प्रचारको सभास्थल हुन्थ्यो ।
सरकारले जमिनको सीमा तोके पनि चिया बगानका नाममा जमिनको ठूलो हिस्सा जमिनदारकै हातमा थियो । गाउँगाउँमा किसान मोर्चाहरू गठन भए । चारु बाबु, कानु दा (कानु सन्याल) जङ्गल सन्थाल, केशव सरकार हाम्रा अगुवा नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले सबै गाउँले, त्यसमा पनि युवाहरूलाई जम्मा पार्नुभयो । गाउँगाउँमा किसान मोर्चाहरू गठन भए । बाबुलाल विश्वकर्मा हाम्रो किसान नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँ किसानको पुरानो नेता । पछि १९६८ मा प्रहरीसितको मुठभेडमा उहाँ सहिद हुनुभयो । सन् १९६७ मार्चको महिना, ३ तारिख जस्तो लाग्छ । किसान मोर्चाले अभियान सुरुगर्यो । जमिनदारहरूको खेतमा “झण्डा गाड्” अभियान सुरु भयो । खेतिहर मजदुर, भूमिहीन किसानले जग्गा कब्जा गरे । “भकारी फोर्” अभियान सुरु भयो । जोतेदारहरूको भकारी फोरेर भूमिहीन किसानलाई अनाज बाँड्न थालियो । जग्गाको कागज जोतेदारहरूबाट कब्जा गरेर जलाइयो । १५देखि २० हजार किसान किसान सभामा सामेल भए । सबै निर्णय किसान सभाले गर्थ्यो ।
नक्सलबाडीमा सुरु भएको किसान आन्दोलन अरू गाउँहरू खरिवाडी, फासिदेवा, झारगाउँ, प्रसाद जोते, हाम्रो जिल्लामा मात्र नभएर अन्य जिल्लामा समेत फैलियो । “भकारी फोर्” अभियानले व्यापकता लिएपछि जमिनदारहरू आत्तिए, सरकार आत्तियो । किसानहरूलाई धरपकड गर्न थालेपछि मुठभेडको स्थिति आयो । खासगरेर सन् १९६७ का मार्चदेखि मेसम्मका दिनहरू तीव्र सङ्घर्षका दिनहरू थिए । हाम्रा हतियार भनेका घरेलु हतियार थिए । हामी १०० जनाभन्दा बढीलाई तीर र धनुषकाँढको तालिम दिइएको थियो । आदिवासीहरू कम बोल्छन्, तर निर्णयमा पक्का हुन्छन्, इमानदार हुन्छन् । गाउँमा नागेन राय चौधरीको चरम शोषण थियो । किसान सभाले गठन गरेको जनअदालतको निर्णयअनुसार उसमाथि जनकारबाही भयो- सफाया ।
नेपालको सिमाना जोडिएको गाउँ झारगाउँमा आन्दोलनले चरम रूप लियो । प्रहरी दमन पनि तीव्र हुनथाल्यो । किसानहरूलाई पक्रेर लगेर यातना दिन थालियो । कानु दा र बाबुलालको खोजीमा थियो पुलिस । २४ मेका दिन गाउँमा एक गाडी पुलिस आए । हामीले वरपरका गाउँका सभा सदस्यलाई पनि बोलायौँ । प्रहरीको गाडी र हाकिमलाई हामीले घेराबन्दीमा पार्यौं । उल्टै उसले ठूल्ठूला कुरा गर्न थाल्यो र जथाभावी बोल्दै महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्न खोज्यो । गोलीले सबैलाई सिध्याइदिने धम्की दिँदै बन्दुक सोझ्यायो । गोलीको धम्कीसँगै आक्रोसित हामीले धनुषकाँढ छोड्यौँ । म मुन्डाकी छोरी । धनुषकाँढ कसरी चलाउनुपर्छ, त्यो मलाई थाहा थियो, त्यसमा पनि हाम्रो तालिम प्राप्त जत्था थियो । मैले छोडेको तीर सोझै प्रहरी इन्सपेक्टर वाङ्दीको छातीको दाहिने कोखमा लाग्यो । चारैतिरबाट तीर छुट्न थाले । वाङ्दी ढलेपछि सबै पुलिस भागे बन्दुक छाडेर । कोही घाइते भएर लडे । त्यतिबेर म बिस वर्षकी थिएँ । धनुषकाँढले लडिरहेको बेला मेरो पिठ्युँमा ६ महिनाकी सानी छोरी थिई । मेरो मात्र होइन, बच्चा हुने हामी धेरजसोले पिठ्युँमा बच्चा बोकेर लडेका थियौँ ।
यो घटनाले कलकत्तालाई पनि हल्लाइदियो । त्यसपछि सिलिगुडीबाट थप प्रहरी आए । ओहो ! बयान गरी साध्ये छैन, के के गरे भनेर । तिनले हाम्रा घरमा आगो लगाए, लत्ताकपडा, अन्नपात सबै खरानी बनाए, भेटे जति सबैलाई पक्रिएर निर्मम यातना दिए । केटाकेटी आइमाई केही भनेनन्, कुटे, दुर्व्यवहार गरे । त्यसपछि हामी पनि भएभरका गाउँलेहरू, किसानसभाका सदस्यहरू जम्मा पारेर नक्सलबाडीतर्फ लाग्यौँ । हामी धेरजसो महिला थियौँ र हातमा धनुषकाँढ बोकेका थियौँ । हामी नक्सलबाडी बजार नजिकै प्रसादजोते गाउँमा पुगेका थियौँ । एउटा प्रहरी जिप हाम्रो सामु आएर रोकियो, हामी धेरै देखेर हो अथवा केले हो, फर्किन खोज्यो । हामीले त्यसलाई घेर्यौं । हाम्रो सङ्ख्या र हातमा धनुषकाँढ देखेर उनीहरू एकदमै आत्तिएका थिए । कामरेडहरूले एकदुई जनाका बन्दुक पनि खोसे । आत्तिएर उनीहरूको अफिसर पनि गिडगिडाउन थाल्यो, हामी तपार्इँहरूलाई पकड्न आएको होइनौँ भन्यो । हामी तपाईँहरूलाई केही गर्दैनौँ भन्यौँ । हामीलाई जान दिनुस् भन्यो । हामीले पनि भैगो त भन्यौँ । तर घेराबाट बाहिर गएपछि त्यो अफिसरले ठोक गोली भन्यौँ र आफूले पनि पिस्तोल निकालेर ठोक्न थाल्यो । ८ जना महिला, १ जना पुरुष र २ जना बच्चाको हत्या गरे उनीहरूले । राती किसान मोर्चाको बैठक बस्यो । किसान कमिटीका कमरेडहरूले भने—“अब सशक्त प्रतिरोधमा जानुको विकल्प छैन ।” भूमिगत भएर लड्ने अठोट भयो । साँच्चै अब लडाइँ सुरु भयो । आफ्नै पार्टीका गृहमन्त्री भएको बेला यस्तो भयो ।
काङ्ग्रेस र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को संयुक्त सरकार थियो । ज्योति बसु गृहमन्त्री थिए । त्यतिबेरसम्म आन्दोलन विस्तारै गाउँबाट सहर पसिसकेको थियो । नक्सलबाडीको किसान आन्दोलनलाई सहयोग गर्न कलकत्तामा ‘नक्सलबाडी कृषक सङ्ग्राम सहयोग समिति’ गठन गरेर कामरेडहरू सभा र जुलुस गर्नथालेका थिए—“नक्सलबाडी ! जिन्दावाद ।" स्कुलकलेजमा नाराजुलुस हुनथालेका थिए । कलकत्तामा बेचैनी सुरु भइसकेको थियो । कलकत्तामा भित्ताहरू “सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ”, “सत्तरीको दशकलाई मुक्तिको दशक बनाऔँ” जस्ता नाराले रङ्गिएका थिए ।
११ जनाको हत्याविरुद्ध कलकत्तामा विद्यार्थी, मजदुर र बुद्धिजीवीहरू सडकमा निस्किए । जनसभा भयो । आन्दोलनलाई गति दिन कतिपय नेता भूमिगत भए । कतिपय नेताहरू पक्राउ परे । हामीले हाम्रो आधारइलाका छोडेनौँ । यसको रक्षा हाम्रो काँधमा आयो । हामी रातभरि सेन्ट्री बस्थ्यौँ पालैपालो । गाउँमा पेट्रोलिङ गर्थ्यौं । गाउँमा प्रहरी आउँदैछ भन्ने हामीलाई पहिले नै थाहा हुन्थ्यो । छापामार शैलीमा घेराउ गरेर आक्रमण गर्थ्यौं तीरले । राइफल खोस्थ्यौं । “लोग्नेमान्छे भन्दा नक्सलबाडीका महिला खतरनाक छन्” भन्थे पुलिसहरू । ओहो, कताबाट आएको हो त्यत्रो साहस ! भिड्न डर लाग्दैनथ्यो । मर्न डर लाग्दैनथ्यो । पुलिसले हामीलाई समातेर लगेपछि हाम्रो नाम सोथ्यो । मेरो नाम द्रौपदी, उसको नाम द्रौपदी, हामी सबै द्रौपदी— ओहो ! कति धेरै द्रोपदी ! हाम्रो एउटै उत्तर सुनेर हैरान हुन्थे पुलिस पनि । “द्रौपदी” व्यङ्ग्य पनि हो र विद्रोह पनि । महाश्वेता दीले द्रौपदीलाई अमर बनाउनुभयो ।
कानु दाको कुरा सोध्नुभएको ? उहाँले चारुदाको पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी बनाउनुभयो । पछिल्ला दिनमा निकै निरास देखिनुहुन्थ्यो । सहरमा बस्नु भएन । सरकारको कुनै सुविधा लिनु भएन । यी यही हो, मेरो छाप्रोसित जोडिएको उहाँको छाप्रो । मार्च २३, २०१० का दिन सदाझैँ उहाँलाई तातो पानी दिन उहाँको छाप्रोको ढोका खोलेँ । उहाँ ओछ्यानमा हुनुहुन्थेन । कता जानुभयो ? यताउति हेरेँ, दुईतिर किला ठोकेर एउटा डोरी झुन्ड्याइएको थियो । कानु दा त्यही डोरीमा आफ्ना फाटेका लुगा र धोती झुन्ड्याउनु हुन्थ्यो । लुगा भुइँमा थिए र डोरी थिएन । उतातिर हेरेँ । दादा पङ्खाको अङ्कुसेमा झुन्डिनुभएको थियो । शरीर मात्र थियो, सास थिएन । पत्रिकामा कतिले खुसीले लेखे, कतिले पीडाले लेखे : नक्सलवादी नेता कानु सन्यालद्वारा आत्महत्या l "
ऊ त्यो भित्तामा टाँगिएको फोटो हेर्नुस्, त्यहाँ चारु बाबु, कानु दा र जङ्गल कमरेड हुनुहुन्छ । यताको फोटोमा धनुषकाँढ लिएका हामी हौँ । कस्ती थिएँ म त्यतिबेला । चारु बाबु जसरी हाम्रा पक्षमा उभिनुभयो, यसले हामीलाई शक्ति दियो । श्रद्धाले हामी उहाँलाई “चारु बाबू” भन्थ्यौँ । उहाँ माउरीको रानोझैँ हुनुहुन्थ्यो । राजनीति मात्र होइन, साहित्य र सङ्गीतप्रति पनि उहाँको असाध्यै रुचि थियो । पहिले एउटै पार्टी थियो— भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिआइ) । पार्टी काङ्ग्रेस सरकारको वरिपरि मात्रै घुम्न थालेपछि र क्रुस्चेवको लाइन सही हो भनेर वर्गसङ्घर्षको विरोध गर्न थालेपछि सन् १९६४ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) गठन भयो । त्यसले पनि चुनावी राजनीति र वर्गसमन्वयको बाटोमा बढी जोड दिन थालेपछि चारु कमरेडहरूले आन्तरिक रूपमा ‘सिलिगुडी’ समूह बनाउनुभयो । यो संशोधनवाद विरुद्ध विद्रोहका लागि तयारी थियो । उहाँले थुप्रै विचारोत्तेजक लेखहरू पनि लेख्नुभयो । त्यतिबेला उहाँ दार्जिलिङ जिल्लाको पार्टी सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो । १९६५ देखि १९६६ सम्म लेखिएका यी रचनाहरू “चारु मजुमदारका आठ ऐतिहासिक दस्ताबेज’ का नामले चर्चित छन् । सन् १९६७ को नोभेम्बरमा ‘चारु बाबुको संयोजकत्वमा ‘अल इन्डिया कोअर्डिनेसन कमिटी अफ कम्युनिस्ट रिभोलुस्नरिज’ (एआइसिसिसिआर) गठन भयो र पछि राष्ट्रिय भेलाले सन् १९६९ मा ‘चारु बाबुको नेतृत्वमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) गठन भयो ।
मेरो घरका मान्छे पनि मोर्चामै थिए । हामी आदिवासीहरू असाध्यै अन्धविश्वासी । आइमाईले पढ्नु हुन्न, राजनीति गर्नु हुन्न भन्थे । देउता रिसाउँछ भन्थे । समाजमा राज्यका विरुद्ध लाग्ने कुरा त परको कुरा थियो । तर मैले उहाँलाई साथ दिएँ । पार्टीको मिटिङ सिलिगुडीमा हुँदा यताबाट २० किलोमिटर पैदल हिँडेर त्यहाँ पुग्थ्यौँ हामी—फासिदेवा थानाबाट जोगिँदै । त्यतिबेला फासिदेवा थाना सबैभन्दा बदनाम र हत्यारा थानाको नामले चिनिन्थ्यो- । महाश्वेता दिले 'द्रौपदी' मा लेखेझैं ।
मान्छेहरू भन्छन्, नक्सलबाडी आन्दोलन सकियो, अहँ सकिएको छैन, यो त झन् रापिलो र तापिलो भएर अघि बढिरहेको छ–एकदमै भर्भराउँदो भएर । जमिनदार र ठालुहरूको नाम र जीवन फेरिएको छ । हिजोका जमिनदारहरू सहर पसे । अब नयाँ जमिनदारहरू विकसित भएका छन् गाउँमा । हिजोका जमिनदारहरूभन्दा कम खतरनाक छैनन् अहिलेका नयाँ जमिनदारहरू—कर्पोरेट जमिनदारहरू । पुराना जमिनदारहरू जमिनका मालिक थिए, अहिलेका जमिनदारहरू महलका मालिक छन्, चिया बगानका मालिक छन् । रियल स्टेट चलाउँछन् । आइएनजिओ चलाउँछन् । ठूलाठूला ब्याङ्कहरू चलाउँछन् । अर्का थरी मालिकहरू हँसियाहथौडा लिएर गाउँमा पस्छन् र भन्छन् सबै कुरा चुनावले पूरा गर्छ । कस्तो खतरनाक राजनीति ! कति सारो उपहास हँसियाहथौडाको !
पछाडि फर्केर हेर्दा मन कताकता हराउँछ । त्यति बेलाको लडाईँ सम्झिदा मन अर्कैअर्कै हुन्छ । तर, मलाई पीडा छैन र पश्चाताप पनि छैन । शोषणबाट मुक्त हुन उठ्नुपर्छ, लड्नुपर्छ भन्ने चेतना नक्सलबाडीले हामीलाई दियो, दुस्मन र मित्र बुझायो, आफन्त र पराई चिनायो । लड्न सिकायो, यही नै सम्पूर्ण हो । हामी निर्धानिमुखाहरू,आदिवासी अनपढहरू पनि बन्दुक चलाउन सक्छौँ भन्ने साहस हामीलाई दियो, बन्दुकको भरमा चलेको सत्ता ढाल्न बन्दुक नै समात्नुपर्छ भन्ने सबैभन्दा उच्च शिक्षा यसले हामीलाई दियो । यो चेतना, यो ऊर्जा नै हाम्रो सम्पति हो, यो कहिल्यै समाप्त नहुने सम्पति हो ।
बाहिर भएको दमनबाट कमरेडहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने हाम्रो चिन्ता हुन्थ्यो । युवाहरू कि त जेलमा थिए, कि त भूमिगत । नेताहरूको रातारात सेल्टर फेर्नुपर्थ्यो । हाम्रा कमरेडहरू र युवाहरूलाई जोगाउने जिम्मेवारी हाम्रो थियो । त्यतिबेर यस क्षेत्रमा महिला र युवा मोर्चाको जिम्मा पार्टीगत रूपमा कमरेड सुनिती करमारको थियो । अहिले उहाँ पनि ७४ वर्षको पुग्नुभयो । कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताका साथ दिनरात नभनी, घामपानी नभनी हामी खटेका थियौँ । सम्पर्क बनाउँदै, नआत्तिन भन्दै सेल्टर सार्दै गरेर हामीले धेरै कमरेडहरूलाई बचायौँ । हामी सेल्टरमा सुरक्षा दिन्थ्यौँ । सूचना बटुल्थ्यौँ, अनेक बहना बनाएर हामीले कमरेडहरूको सेल्टरको सुरक्षा गरेका थियौँ ।
आन्ध्रका कमरेडहरूले यो यथार्थलाई बुझे । बिहारका कतिपय कमरेडहरूले पनि यस यथार्थलाई बुझे । आन्ध्रका कमरेडहरूले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) पिपुल्स वार निर्माण गरेर मालेमाको बाटो, नक्सलबाडीको बाटो समाते । कमरेड कन्हाइ चटर्जीको विराशत समातेको बिहार-बङ्गालमा सक्रिय ‘दक्षिणदेश’ को नेतृत्वमा रहेको ‘माओवादी सेन्टर’ (एमसिसी) का कमरेडहरूले पनि यस यथार्थलाई बुझे । ‘पार्टी युनिटी’ का कमरेडहरूले पनि यो कुरालाई बुझे । खासगरेर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) पिपुल्स वारले क्रान्तिको झण्डालाई दरोसित समात्यो । पहिले ‘पार्टी युनिटी’ को ‘पिपुल्स वार’ समूहसित एकता भयो । अनि पछि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) पिपुल्स वार र एमसिसीबीच एकता भयो । यिनै दुई पार्टीको मेलबाट सन् २००४ मा बनेको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले चारु बाबुको विरासतलाई अघि बढाइरहेको छ । नक्सलबाडीले आरम्भ गरेको नयाँ जनवादी क्रान्तिको झण्डालाई थप रक्तिम बनाएर यसले माथिमाथि उचालिरहेको छ । दुस्मनको आधुनिक हतियार र चौतर्फी आतङ्कलाई चुनौती दिँदै सिङ्गो भारतभरि महान् जनयुद्धको झण्डा यसले फहराइरहेको छ । क्रान्तिकारीहरू सबै यसैमा गोलबद्ध बनिरहेका छन् । सन् २०१५ मा कमरेड अजिथको नेतृत्वमा रहेको र ‘रिम’ को संस्थापक सदस्य पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) नक्सलबाडी पनि यसमा आएर यसमा समावेस भएपछि यो झन् बलियो भएको छ ।
सम्झिन्छु लीला दीलाई । चारु कमरेडकी जीवनसाथी लीला सबैकी लीला दी हुनुहुन्थो । वहाँ पनि राजनीतिक परिवारसित सम्बद्ध हुनुहुन्थो । सन् १९४८ तिर “तेभागा” किसान आन्दोलनको समयमा केही महिना जेल पनि पर्नुभएको थियो । सम्पन्नताको जीवन खोज्नु र रोज्नु भएन दिदीले । उहाँका छोराछोरीहरू अहिले पनि भन्छन् :
“जीवन साह्रै दुखपूर्ण थियो, तर माँले कहिल्यै पनि तेरा बाले गर्दा यसो भयो, उसो भयो भनेर गुनासो गर्नु भएन, पीर मान्नु भएन । बा मात्र होइन, आमा पनि महान् हुनुहुन्छ । हाम्री आमा सबैकी लीला दी हुनुहुन्थो । उहाँले हामीलाई कहिल्यै दुखको आभास हुन दिनुभएन । केही पीडा र समस्या त झेल्यौँ, तर हाम्रो मनोवल उच्च छ, हामीले टाउको निहुराउनु परेन । १९६९ मा पिताजी भूमिगत हुनुभयो । प्रहरी खोजीमा थियो । चौबिसै घण्टा आमा निगरानीमा हुनुहुन्थो । आमाको पछि लाग्थे सिआइडीहरू—चारुलाई पक्कै भेटन जान्छे भनेर । प्रहरी र जासुसका आँखा छलेर आमा पिताजीलाई भेट्न जानुहुन्थ्यो । आमालाई उत्साहित पार्नुको साटो कतिपय नेता भनाउँदाहरू चारुले गलत लाइन लियो भनेर निरुत्साहित पार्थे । आमाले कहिल्यै यस्ता कुरामा चासो राख्नुभएन । यस्ता कुराले उहाँलाई अलिकति पनि विचलित पारेन । आँसु झार्नु भएन । जुलाई २७, १९७२ मा कलकत्ताको लाल बजारस्थित प्रहरी मुख्यालयमा पिताजीको मृत्यु भएको खबर सुनेर आमा पहिलो पल्ट भक्कानिनुभयो । मुटुको बिरामी, पिताजीलाई अक्सिजन नदिएर तड्पाईतडपाई मारिएको थियो । घटना सम्झिदै छोरा अभिजित भन्छन्—‘सेतो कपडाले छोपिएका पिताजीका खुट्टाका पैताला एकदमै काला भएका थिए, ती काला पैताला अझै पनि मेरो आँखामा घुमिरहेका छन् । पिताजीबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ, मेरो बा नै मेरो नायक हो ।”
एकजना लेखकले लेखेको कुरा म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु । ल सुन्नोस् :
झमक्क साँझ परेको थियो । चारु दाको सासहीन शरीरलाई एकदमै गोप्य किसिमले सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षासाथ कलकत्ताको एसएसकेएम अस्पतालबाट केवरतलाको मसानघाट ल्याइएको थियो । यस्तो लाग्थ्यो सहरमा कर्फ्युँ लगाइएको छ । सडक खाली गरिएको थियो । सडकको दुवैतिर लाइनबद्ध भएर हतियारसहित पुलिस तैनाथ थिए । तर, जति लुकाए पनि चारुको मृत्युको खबर लुक्न सकेन । यस्तो बेला पनि छेउकुनाबाट मान्छेहरू निस्केर नारा लगाएको सुनिन्थ्यो : 'चारु दा जिन्दाबाद !' 'नक्सलबाडी जिन्दाबाद ।'
अब ५० वर्ष भएको छ । अहिले नक्सलबाडीस्थित सहिदहरू र मार्क्स , लेनिन, स्टालिन, माओ अनि चारुको स्तम्भ रङ्गाउने काम थालिएको छ । कतिपयले यसैका नाममा कमाउ धन्दा पनि गर्नेगरेका छन् । चारुले लिएको मूल्यमान्यता र क्रान्तिको बाटो त्यागेर पनि क्रान्तिको स्वाङ गर्नेहरू जब नक्सलबाडी र चारुको बखान गर्छन्, व्यङ्ग्यले हाँस्न मन लाग्छ । माओ र चारुको नाम लिने र क्रान्तिको कुरा गर्नेहरू धेरै भए पनि माओ र चारुले देखाएको बाटोमा निरन्तर अघि बढिरहेको पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) मात्रै छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको कुरा गर्नेहरू पनि धेरै छन्, तर, नयाँ जनवादको क्रान्तिकारी बाटोप्रति प्रतिबद्ध पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) मात्रै छ । सशस्त्र सङ्घर्षको कुरा गर्नेहरू पनि छन् । तर मालेमामा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्धको वैज्ञानिक बाटो रोज्ने पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) मात्र छ । आदिवासी, दलितहरू र अन्य उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि बलिदानको बाटो रोज्ने पार्टी माओवादी पार्टी मात्रै छ ।
त्यसैले म विश्वस्त छु नक्सलबाडीको मशाल निभ्ने छैन । यो त रक्तवीज हो, मर्ने छैन, यो क्रान्तिकारी विचार हो, निर्धानिमुखाको मुक्तिको बाटो, यो कहिल्यै पुरानो हुने छैन । संसारमा निर्धानिमुखा छउन्जेल, वर्गशोषण रहुन्जेल नक्सलबाडी मर्ने छैन । चारु बाबुले भन्नुभएको थियो : “नक्सलबाडी झन् फैलने छ, अब हज्जारौँ नक्सलबाडीहरू जन्मने छन्, नक्सलबाडी मरेको छैन र कहिल्यै मर्ने पनि छैन ।”
थुप्रै द्रौपदीहरू अहिले पनि नाङ्गिन बाध्य छन्, मर्न बाध्य छन् । यी हेर्नोस् यो छत्तिसगढको भर्खरैको समाचार, अनि यो फोटो :
हरेक दिन यस्ता समाचारले भरिएका हुन्छन् समाचारपत्रहरू । अनि कसरी मर्छ नक्सलबाडी ! अनि कसरी चुपचाप बस्छन् दोप्ती र द्रौपदीहरू ? हिजो हामीले धनुषकाँढ बोक्यौँ, अहिले उनीहरू एके-४७ बोकेर दुस्मनविरुद्ध भिडछन् । कहाँ मरेका छन् र सपनाहरू !
चारु बाबुले भन्नुभएको थियो : “जो आफू पनि सपना देख्दैन र अरूलाई सपना देख्न सक्ने बनाउँदैन, ऊ क्रान्तिकारी हुन सक्तैन ।”
म नक्सलबाडीकी आमा, म दोप्ती, म महेश्वेता दिकी द्रौपदी, विश्वस्त छु । मरेका छैनन् हाम्रा सपनाहरू र कहिल्यै मर्ने छैनन् निर्धानिमुखाका सपनाहरू । सपना देखाउनेहरू पनि मरेका छैनन् । ती आन्ध्रमा लडिरहेका छन् । उडिसामा लडिरहेका छन् । छत्तिसगढ, झारखण्ड बिहार बङ्गाल, मणिपुरमा लडिरहेका छन् । ती पेरू, टर्की र फिलिपिन्समा लडिरहेका छन्, नेपालमा लडिरहेका छन् । जहाँजहाँ अन्याय, अत्याचार र उत्पीडन छ, त्यहाँत्यहाँ लडिरहेका छन् । त्यसैले त भन्छु :
“तुम्हारबाडी, अमारबाडी नक्सलबाडी ! एकइ रास्ता...एकइ रास्ता नक्सलबाडेर एकइ रास्ता ।”